10 ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနိယာမများ - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်တွင်ရှိသည်
Recovery ကို၏ 10 အခြေခံမူ
100 နေ့ရက်များ! (! 2nd န်းကျင်အချိန်) - အဘယ်သို့ငါသင်ယူကြသနည်း
အောက်တွင်လက်ရှိနှင့် abstinence ငါ၏အရှည်ဆုံးကာလအတွင်းမှာအကြှနျုပျအဘို့အရပျ၌ဖြစ်ဘူးသောအတော်ကြာအခြေခံမူဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သစ်တောထဲမှာပျောက်ဆုံးသွားရနှင့်ကျွန်ုပ်တို့နည်းလမ်းရှာရန်လိုအပ်သည့်အခါသူတို့အကြိမ်, နောက်တဖန်သင်၏အလမ်းရှာဖွေဤအခြေခံမူ (သို့မဟုတ်သင်တို့အဘို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးသောသူတို့အား) ကိုအသုံးပြုပါ။
အောက်ကအခြေခံမူ 2014 ၏နိုဝင်ဘာလပြန် Reboot Nation ပူးပေါင်းကတည်းကငါ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံများအတွက်တီထွင်ခဲ့ကြခြင်း, Real-time မှာသူတို့ကိုလျှောက်ထား၏မိုက်ထဲကလာကြပြီ။ လုံ့လဝီရိယနှင့်အတူလျှောက်ထားဒါတွေက relapse ဆီသို့မည်သည့်အနှုတ်လက္ခဏာလမ်းကြောင်းသစ်န်းကျင်ကိုဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ ငါမြော်လင့်သူတို့သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအတွက်အကူအညီများစွာရှိနိုင်ပါသည်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာအဖြစ်တင်ဆက်ခဲ့ပြီးကားအဘယ်သို့ porn တစ်ခု Option ကိုမဟုတ်ပါ စိတ်ဓာတ်။ ဆောင်းပါးထဲမှာ Underdog ဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်းငါက 'Porn မရှိဘူး' ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်ကိုခေါ်မယ်။
ကျနော်တို့ကဒီအကြောင်းစဉ်းစားလေ့ရှိတယ်။ ငါတို့စိတ်ထဲသို့ယူဆောင်လာသရွေ့၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သတိတွင်၎င်းကိုအဖြစ်မှန် (နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်) ဖြစ်နိုင်သည်။
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်အတွေးများပေါ်ပေါက်လာခြင်းကိုတားဆီး။ မရနိုင်ပါ၊ သို့သော်၎င်းတို့ကိုသူတို့လျင်မြန်စွာနှင့်အလျင်အမြန်ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။ သူတို့တွေဖယ်ထုတ်ဖို့ခက်ခဲလာပြီဆိုရင်သူတို့တွေအတွေးတွေလျော့သွားအောင်လုပ်လိုက်တာပဲ။ “ ငှက်တိုင်းကို overhead ပျံသန်းခြင်းမှတားဆီးနိူင်မည်မဟုတ်သော်လည်းသင်၏ဆံပင်တွင်အသိုက်တည်ဆောက်ခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်”
ကျွန်ုပ်အတွက်တော့အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသည့်အရှက်ရစေသည့်အရာမှာဥပဒေနှင့်တရား ၀ င်မှုရောနှောခြင်းများမပါ ၀ င်သော၊ ကျွန်ုပ်၏အကျင့်ယိုယွင်းမှုကိုလိုင်စင်ပေးမည့်အစားအနာဂတ်အပြစ်အားလုံးအပါအ ၀ င်ကျွန်ုပ်၏အပြစ်အားလုံးကိုခွင့်လွှတ်ခဲ့သည်ကိုလက်ခံရန်လာသောအခါ၎င်းသည်ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိခဲ့သည်။
ဒီအထဲတွင်ပါဝင်သည်သင်၏စွဲလမ်းကျင့်ဝတ်မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ကိုအမှားအမှန်ပြcastနာများအဖြစ် (ချွတ်ယွင်းချက်မဖြစ်စေဘဲ) သူတို့ကိုယ်တိုင်သနားကြင်နာသောနည်းများဖြင့်စဉ်းစားပါ။ သင့်ရဲ့ရုန်းကန်မှုများနှင့်အားနည်းချက်များကိုသင်ကိုယ်တိုင်နားလည်ပါ။ ကျဆုံးပြီးနောက်၌ပင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်မတင်ပါနှင့်။ သင်၏အဆိုးဆုံးရန်သူဖြစ်မည့်အစားမိမိကိုယ်ကိုအစဉ်သနားကြင်နာသင့်သည်။
အဘယ်အရာကိုတစ်စုံတစ်ဦးကဘာသာရေးကိုမဖြစ်လျှင်? ငါတူညီသက်ဆိုင်ထင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကအမြဲနေပါစေအဘယ်အရာကိုကိုယျ့ကိုယျကိုမျက်နှာသို့သနားကြင်နာတတ်တဲ့နှင့် ourselves- ၏ခွင့်လွှတ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိပ်အရှက်ကွဲခြင်းသာလောင်စာအတွက်စွဲ!
3 ။ တစ်ဦးလုံးဝအသစ်အသငျသညျမဟုတျဘဲအဟောင်းကိုသင်အနုတ် Build PMO.
~ `ဆိုကရေးတီး 'စာလုံး၊ ငြိမ်းချမ်းသောစစ်သူရဲ၏လမ်း - Dan Millman မှဘဝကိုပြောင်းလဲစေသည့်စာအုပ်တစ်အုပ်
၎င်းသည်အထက်ဖော်ပြပါအချက်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အဲဒီအစားကျွန်တော်တို့ဟာအလုပ်များလွန်းနေတယ်၊ ​​ငါတို့ဘ ၀ တွေကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရုံတင်မကဘဲ၊ PMO။ ဤသည်မှာ“ ငါဒါကိုစွန့်လွှတ်ပြီးအခြားတစ်ခုလုပ်ဖို့လိုသည်” မဟုတ်ပါ၊
အခုမင်းရဲ့အခွင့်အရေးပါ။ မင်းလုပ်ချင်တာတွေအားလုံးကိုလုပ်ခဲ့ပေမယ့်ညစ်ညမ်းမှုနဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကမင်းကိုအထီးကျန်စေတဲ့၊ ပုလ်တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကိုလုယက်ခဲ့တယ်။ အခုမင်းအဲဒီစွမ်းအင်ကိုမင်းပြန်လိုချင်တဲ့ဘဝကိုပြန်ပြီးပြန်လည်ဖန်တီးနိုင်အောင်ပြန်စွမ်းနိုင်ပါပြီ။ ဤဘဝအတွက်ရူပါရုံသည်သင်၏နိုးနေသောအချိန်ကာလတိုင်းကိုလောင်ကျွမ်းစေသင့်ပြီးသင်အိပ်ပျော်သွားသည်အထိပင်ဖြစ်သည် 'သဘာဝကလေဟာနယ်ကိုမုန်းတယ်' ဒါကြောင့်ငါတို့ပထမနေရာမှာစွဲလမ်းမှု၊ ယခုတွင်၎င်းကိုသင်လုံးဝအသစ်အဆန်းအတွက်ရူပါရုံများနှင့်လုပ်ရပ်များဖြင့်ဖြည့်စွက်ရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။
4 ။ အစပျိုးခြင်းနှင့်အတူအလုပ်မလုပ် / Self-ထိန်းချုပ်မှုပြန်လည်အစစ်အမှန်အချိန်အခြေအနေများတွင်တိုက်တွန်းထားသည်။
ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ERP (ထိတွေ့ - တုံ့ပြန်မှု - ကာကွယ်တားဆီးရေး), ဒါမှမဟုတ်ထိတွေ့ကုထုံးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ဘယ်မှာဒီနေရာကိုပါပဲ။ သို့သော်၎င်းသည်ထိန်းချုပ်ထားသောအလေ့အကျင့်တစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်တကယ့်ဘဝအခြေအနေများတွင်အစပျိုးခြင်း (အပြင်ဘက်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတွင်းပိုင်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ) နှင့်အစစ်အမှန်အချိန်ရှိတိုက်တွန်းမှု / သွေးဆောင်မှုများနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ အမှန်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်နေ့စဉ်ဘ ၀ သို့သယ်ဆောင်နိုင်ရန်အစစ်အမှန်ဘဝအခြေအနေများကိုအတတ်နိုင်ဆုံးအနီးကပ်တုပလိုကြသည်။
ဒါကတိုက်တွန်းချက်ကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမယ်ဆိုတာကိုလေ့ကျင့်တာတစ်ခုပါ။ ဤအရာများသည်အမှန်တကယ်ရေတွက်သည့်အချိန်များအတွက်လေ့ကျင့်ရန်မလွယ်ကူပါ၊ သင့်နှလုံးသားလှုပ်ရှားနေပြီးသွေးခုန်နှုန်းမြင့်တက်လာတဲ့အခါ၊ အသက်ရှူကျပ်လာတဲ့အခါဘာလုပ်ရမလဲ။ တိုက်တွန်းမှုများကျွန်ုပ်တို့အပေါ်သို့ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများကိုပင်သတိပြုမိပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစွဲအလမ်းများနေသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သိပါသလော။
ဤအချိန်သည်သင်ထွန်းလင်းနိုင်သည့်အချိန်အတိအကျဖြစ်ကြောင်းသင်သိပါသလား။ မင်းရဲ့စွဲလမ်းမှုကမင်းကိုထိန်းချုပ်မထားဘူးဆိုတာကိုလေ့လာပါ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွန်းအားဖြစ်စေ၊ စိတ်ထဲတွင်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်အမှတ်တရများပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်စေဤကာလအတွင်းကိုင်တွယ်ရန် AWARE အတိုကောက်ကိုလိုက်နာပါ။
A - လက်ခံမှု။ ကတိုကျတှနျးသို့မဟုတ်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း, စိုးရိမ်ပူပန်ခံစားချက်တွေကိုကြိုဆိုပွဲပင်, လက်ခံကြလိမ့်မည်
W- Watch ။ သနားစုံမက်ခြင်းနှင့်ဥာဏ်နှင့်တကွ, တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းမရှိဘဲပြင်ပလေ့လာသူအဖြစ် Watch ။
A- အက်ဥပဒေ။ ယခုအချိန်တွင်အတွက်အေးဆေးတည်ငြိမ်တည်းခို, နက်ရှိုင်းသောအသက်ရှူခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဤခံစားချက်များကိုအပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုယူပါ။
R- ထပ်ခါတလဲလဲ။ ခံစားချက်ဖြတ်သန်းသည်အထိထပ်ခါတလဲလဲ, 1-3 လုပ်ပါ။
E- မျှော်လင့်ထား။ စိုးရိမ်စိတ်ဤခံစားချက်များကို, ကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်း, ဒါမှမဟုတ်တိုကျတှနျးထားကြောင်းသိကြလာသျောလညျးသငျအောငျမွငျစှာကသူတို့ကိုကိုင်တွယ်လိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးမျှော်မှန်းရပါလိမ့်မယ်။
5 ။ တပ်မက်သောစိတ် / voyeurism ထိပါးရန် Two-ဒုတိယစည်းမျဉ်းကိုလိုက်နာပါ။
အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်သူမ၏အလှအပနှင့်တကယ့်တပ်မက်မှုအတွက်တန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်တကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းတို့၏နားလည်ရခက်သော၊ သူတို့ရဲ့အလှအပကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးထားလေးမြတ်နိုင်တဲ့နေရာရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်တပ်မက်စိတ်မရှိဘူး၊ voyeuristic ဖြစ်မလာဘူး၊ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်စစဉ်းစားတဲ့အခါ၊ တဖြည်းဖြည်းမသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီးတပ်မက်မှုနဲ့လဲကျမိတယ်၊
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဒုတိယကြည့်ခွင့်ရသည့်အချိန်ကိုသာခွင့်ပြုပြီးနောက်မှသင့်မျက်စိကိုလွှဲပါ။ ဒီဟာကနည်းနည်းလေးကြာတယ်၊ ဒါပေမယ့်မကြာခင်မှာပဲအလိုအလျောက်လာလိမ့်မယ်။ ငါစက္ကန့်နှစ်မိနစ်တောင်မကြာလျှင်ခဏခဏကျွန်ုပ်အလိုအလျောက်ထွက်သွားလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်နေသည်ဟုခံစားရလျှင်လူသိရှင်ကြားပြောပါ၊ ထို့နောက်နှေးနှေးသွားပြီးသင့်အသက်ရှူမှုကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစေသည်။
ဒုတိယစည်းမျဉ်းနှစ်ခုကကွဲပြားခြားနားသည်မှာ 'white-knuck it' ဟုပြောပြီးရွေ့လျားနေသောအရာအားလုံးကိုတပ်မက်ခြင်းမပြုခြင်း၊ မိန်းမတစ်ယောက်နှင့်ပင်တွေ့ရန်ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ ဒုတိယစည်းမျဉ်းနှစ်ခုက "အိုကေ၊ မင်းလှလှပပလေးတစ်ကောင်ကိုတွေ့နိုင်ပြီးသူမ၏အလှအပကိုတန်ဖိုးထားနိုင်သည်။ ၂ စက္ကန့်လောက်သာကြာပြီ" ဟုဆိုသည်။ ယခုအချိန်သည်ကြာရှည်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးဆက်ပွားစနစ်အားသဘာဝဇီဝဗေဒဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်နိုင်သည့်အရာအားနှောင့်ယှက်ခြင်း၊ ဦး နှောက်ကသူမကိုဖြစ်နိုင်ချေရှိသောမိတ်ဖက်မိတ်ဖက်အဖြစ်မြင်လာသည်။ ဒုတိယအချိန်ကာလနှစ်ခုအတွင်း၌ပင်ကျွန်ုပ်စိတ်သည်ပုံရိပ်ကိုမှတ်မိနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ထဲသို့သိပ်မပြင်းထန်ပါ။ အဲဒီအစား, ငါအများပြည်သူအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်ပိုကောင်းတဲ့သဘောမျိုးရ, ငါ့ပုဂ္ဂလိကဘဝသို့ကူးစက်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အလှအပကို dopamine ထိမှန်ခြင်း (သို့) နောက်ပိုင်းတွင်ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သောအပြုအမူများပြုလုပ်ခြင်းကိုခံယူခြင်းမပြုဘဲတန်ဖိုးထားနိုင်သည်။
6 ။ မရတိုင်းချုံးနေတဲ့ relapse ဖြစ်ပါသည်, သင်ခန်းစာများကိုမအောင်မြင်မှုများအဖြစ်သင်ယူနှင့်မအဖြစ်ချုံး recast ။
ဒါက "ခေါ်" အဘယ်အရာကိုပြော၏ Abstinence ချိုးဖောက်ခြင်း Effect။ ကိုအနည်းငယ်စုံလင်အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသော reboot ဒါမှမဟုတ် recovery အားထုတ်မှုရှိသည်သောသူကဒီမှာရှိပါတယ်။ ချုံးယေဘုယျအားဖြင့်ဖြစ်ပျက်စေခြင်းငှါ, ကျွန်တော်ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါတစ်ဦးအရေးပေါ်အစီအစဉ်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
မည်သို့ကျွန်တော်တစ်ဦးချုံးကိုင်တွယ်ကျနော်တို့တင်ပြသင်ခန်းစာများကနေလေ့လာသင်ယူရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးအပြည့်အဝလွ relapse ထဲသို့ကျပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့လာနိုင်သလား? ဒါမှမဟုတ်ကျနော်တို့ထိန်းချုပ်ထဲကရှိပါသလဲ ရှိပါသလား re ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန် ချုံး? နေ့စဉ်သို့မဟုတ်အပတ်စဉ်သို့မဟုတ် bi-အပတ်စဉ်အခြေခံပေါ်မှာဟောင်းတဦးအပြုအမူတွေတစ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအထပ်ထပ်ကပြန်လုပ်ဖြစ်တယ်, သို့မဟုတ်?
ဒါဟာငါတို့ရဲ့ကောင်တာ၊ ငါတို့ reboot, ဒါပေမယ့်သင့်ကောင်တာကိုဘယ်အချိန်မှာ reset လုပ်ရမယ်ဆိုတာသိဖို့လုံလောက်တယ်။ သင်တစ် ဦး တည်းအတွက်အကောင်းဆုံးတရားသူကြီးဖြစ်နိုင်သည်။ အခြားသူများ၏ထင်မြင်ချက်ပေါ်မမူတည်ဘဲသင်၏ကိုယ်ပိုင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကြိုးပမ်းမှုများနှင့်ရည်မှန်းချက်များအတွက်အမြဲတမ်းလုပ်ဆောင်ပါ။
သင်ကညစ်ပတ်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုထဲသို့မကျစေဘဲနောက်ကွယ်မှပြန်ခုန်ထွက်လာခြင်းသည်အမြန်ဆုံးဖြစ်သည်။ မမူးပါနဲ့ တစ်ချုံးပေါ်၌ကြောင်းကိုသင်၏အားထုတ်မှုမှ incalculable ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမရှိအဖြစ်။
7 ။ အားနည်းခြင်း၏သင့်ကိုယ်ပိုင်အချိန်များကိုသတိရ, ဝေဖန်မှုမရှိဘဲအခြားသူများကိုထောက်ခံပါတယ်။
ခေါ်သိမ်မွေ့တဲ့သဘောထားရှိတယ် မာနထောင်လွှား, သင်သည်ဤမျှကာလပတ်လုံးကာလအဘို့အကောင်းကောင်းလုပ်နေတာစေခြင်းငှါ, ပြီးတော့အခြားသူများကို 10 ရက်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းတိုင်း၎င်းတို့၏ကောင်တာပြန်လည်စတင်ရုန်းကန်, အခြားသူများရုန်းကန်နေသည်ကိုတွေ့မြင်ရသောအခါ။ "လူ, သူတို့တော်တော်မကောင်းတဲ့လုပ်နေရမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့အတူတကွစုစည်း။ မရနိုင်သလား?!” သို့မဟုတ်သင်သူတို့ကို“ ကူညီပေးနေသည်” ဆိုလျှင်ညီအစ်ကိုတစ် ဦး သည်မမြင်ရသောလိုက်နာမှုဖြင့်ပြန်လည်ရိုက်နှက်သကဲ့သို့အရူးကဲ့သို့သောပြစ်တင်ဝေဖန်ခြင်း၊ လက်ချောင်းတစ်ချောင်းကဲ့သို့ဖြစ်လာသည်။
အဲဒီမှာအထဲကအများအပြားစွဲပုံစံများ, အချို့ - (ငါနောက်သို့မလိုက်သော) စွဲ၏ရောဂါ - မော်ဒယ်အပေါ်အခြေခံပြီးနှင့်အခြားအလေ့အထများ၏သိပ္ပံအပေါ်အခြေခံပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်အခြားသူများကိုဤအရာတို့ကိုအဘယ်မှာရှိဘာသာရေးနောက်ခံကနေလာ သူတို့သည်ငါ့အတွက်ဤမျှကာလပတ်လုံးဖြစ်သကဲ့သို့ Hyper-moralized ဖြစ်နိုင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ချဉ်းကပ်နည်းတွေရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်ရလဒ်တွေအတူတူပဲ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းစသည်တို့ကိုဖြတ်ပစ်လိုက်သည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအားလုံးကသဘောမတူပါဘူး (ငါအဲဒီလိုအဖြစ်မျိုးရှုမြင်တယ်)
သင်တစ်ဦးကြိုးပမ်းသို့မဟုတ်အားနည်းအစ်ကို / အစ်မကိုကူညီကိုသွားသည့်အခါအမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုယ်သတိရပါ။ သူတို့ကိုနှိမ့်ချကန်, သူတို့အပေါ်မှာရပ်နေမရ, သူတို့ကိုတက်ကူညီပေးနေ, သူတို့အနားမှာရပ်တယ်။
8 ။ အသက်ရှူနှင့်တရားအားထုတ်မှတဆင့်အသစ်ဖြေရှင်းယန္တရားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့သတိနည်းစနစ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်။
ဒီအမှတ်ကနံပါတ် ၁ ဖြစ်နိုင်တယ်၊ နံပါတ် ၁ ကနေ ၁၀ အထိဖြစ်နိုင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့လုပ်သမျှအားလုံးမှာသတိရရမယ်။
သတိသည် ... ပစ္စုပ္ပန်တခဏအတွက်, ရည်ရွယ်ချက်အပေါ်နှင့် Non-တရားသဖြင့်စီရင်: တစ်အထူးသဖြင့်လမ်းအတွက်သတိထားရမှာ - Jon Kabat-Zinn
သတိ (sati, ပါဠိဘာသာစကား) တွင်လက်ရှိဖြစ်ခြင်း, သတိထားအဖြစ်သတ်မှတ်သည်, ထို့အပြင်ယခုအချိန်တွင် core ကိုသို့မဟုတ် key ကိုသှနျသငျထဲမှာသတိရစနစ်တကျပစ္စုပ္ပန်အတွေ့အကြုံများ, ခံစားခကျြ, ဒါမှမဟုတ်အတှေးအနက်ကိုဘော်ပြမှကူညီပေးပါမည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
သတိပြုမှုသည် Noble Eight Fold Path တွင်ဆွေးနွေးထားသည့်အတိုင်း 'မှန်ကန်သောစဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်း' ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်လက်တွေ့အားဖြင့်လူတစ် ဦး အား "ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခြင်း" မှဆိုလိုသည်။ အစီအစဉ်များ ကြောင်းကျွန်ခံများနှင့်ဆငျးရဲဒုက်ခဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ။
စိတ်ခံစားမှုမငြိမ်မသက်ခွအေနမြေားအားလုံးပေမယ့်မထိန်းချုပ် haywire သွားနှင့်ဖြစ်စေခြင်းငှါ, ကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်ပတ်မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုနှင့်, ဒီအပေါငျးတို့သမှလွတ်မြောက်ရန်ကြောင့်ရှောင်ကြဉ်ရန်, ဒီ၏နာကျင်မှုနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကနေကိုယျ့ကိုယျကိုသီးခြားထားရန်လိုအပ်ကြောင်းစေခြင်းငှါ, undercut နှင့်အသက်ရှူခြင်းဖြင့် circuited တိုတိုဖြစ်ပြီး, ဖြစ်ခြင်း , အောက်မေ့သတိပြုမိ, ညာအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူ defog နှင့်လက်ရှိအခြေအနေရှင်းလင်းမထွက်ရအခြေခံမူကိုအောကျမေ့။
တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းအားဖြင့်မှတ်ဥာဏ်ကိုလက်တွေ့နည်းလမ်းဖြင့်သင်ယူပြီး၊ အတွေးများကိုဂရုမစိုက်ဘဲယခုအချိန်တွင်ရောက်ရှိခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အတွေးများ / ခံစားချက်များပေါ်ပေါက်လာပါကကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့ကိုမတိုက်ခိုက်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရှိအချိန်ကိုသာအာရုံစိုက်ပြီး၎င်းတို့အား ဆက်လက်၍ တရားမျှတစွာစီရင်ခြင်းမပြုပါ။ ဒီအလေ့အကျင့်ယခုအချိန်တွင်အတွေ့အကြုံများအားဖြင့်ငါတို့အခိုက်သို့ကူးဖိတ်။
9 ။ အထူးသဖြင့်ကြာမြင့်စွာ Streak ထံမှ lapsing ပြီးနောက်ဟောင်းအတွေးနှင့်အလေ့အထပုံစံများသို့ကျသွားသတိပြုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့အတတ်နိုင်ဆုံးနှင့်အမြင့်မြတ်ဆုံးအားထုတ်မှုများရှိသော်လည်းအချိန်အတန်ကြာပြီးနောက်၌ပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နက်ရှိုင်းစွာအမြစ်တွယ်နေသောအတွေးအခေါ်ဖြစ်စဉ်များကိုသတိပြုရန်လိုအပ်သည်။ ငါတို့ကအလွယ်တကူ ၀ တ်ဆင်ထားသည့် ၀ တ်စုံ ၀ တ်ထားသည့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အားကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်ပေါ်တွင်ကိုင်တွယ်နိုင်သည်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအယုံအကြည်ကင်းမဲ့သောကျွန်ုပ်တို့၏သူဌေးကအခြားကောင်းစွာလေ့ကျင့်ထားသောအတွေးဖြစ်စဉ်များနှင့်ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုအန္တရာယ်များသောအခြေအနေတွင်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအခြားအချက်များအတိုင်းဤအရာများကိုလုပ်ဆောင်ပါ၊ သို့သော်သတိပြုပါ
ရှည်လျားသောနှစ်ရှည်လများရှောင်ကြဉ်မှုပြီးဆုံးသွားသောအခါ၎င်းမြောင်းထဲမှထွက်ပြီးလွန်ခဲ့သောတစ်ရက်သို့မဟုတ်နှစ်နှစ်ခန့်ကအသုံးပြုခဲ့သောအောင်ပွဲအဆင့်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အလွန်ခက်ခဲပုံရသည်။ ငါတို့ထင်သည်ဟုထင်မိနိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းကိုက်။ ကျသည်အထိ၊ သင့်အတွက်မည်သည့်အရာမဆို၊ ညစ်ညမ်းသောအစားထိုးသူများမှတစ်ဆင့်ညစ်ညမ်းသောတွင်း၏အနားကွပ်အထိအရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်၊ ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သတိထားပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့ပုံမှန်စံသစ်ဆီကိုပြန်လာဖို့ဘယ်လောက်ခက်တယ်ဆိုတာခြိမ်းခြောက်နေတဲ့အတွက်ငါတို့ကိုယ်တိုင်ကပိုဆိုးတဲ့ရန်သူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးပြန်ဖြစ်သွားသည်ဖြစ်စေ၊ ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း (သို့) အာရုံကြောဟောင်းနွမ်းနေသည့်လမ်းကြောင်းဟောင်းများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းတွင်ဖြစ်စေဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အရာကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။
တတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်ပြန်ခုန်နိုင်ပြီး၊ သင်ရရှိခဲ့သောအောင်မြင်မှုများအားလုံးကိုပြန်လည်ပြောပြပါ။ တိုးတက်မှုအားလုံးသည်မပျောက်ပါ။ အရင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကိုမြန်မြန်ပြန်သွားပါ၊ သင်ဤထက်ကောင်းသည်!
10 ။ အပြုအမူတွေကိုအကျိုးသက်ရောက်စေရာတွေပေါ်မှာမကောင်းမြင်စိတ်တွေနှင့်စိတ်ခံစားမှု၏တန်ခိုးသတိပြုပါ။
၏တန်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရန် CBT (သိမှုအပြုအမူကုထုံး), နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးများကို-ခံစားချက်တွေကို-အပြုအမူတွေကိုအဘက်ဘက်မှအထောက်အကူကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်ဆီသို့ရှိသည်သောစနစ်များ, အခြားသူများနှင့်အနာဂတ်အတွက်အခြေခံနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောဘယ်လိုနားလည်သဘောပေါက်။
သင့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင်ယူဖို့ Begin, ကိုယ်ကိုသိကြ, အခွခေံမူအဖြစ် Delphi မှာ Apollo မှဗိမာနျတျောအထက်တွင်ရေးထိုးကပြောပါတယ်။ သင်တို့၏အကြံအစည် Watch, သူတို့ကအဆိုးမြင်စိတ်တွေမတယောလမ်းကြောင်းသစ်အောက်ပါနေကြသနည်း သင်သည်လည်းအလေးအနက်ထားသင်တို့၏အကြံအစည်ယူပြီးပါသလား? သင့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုအကြောင်းကို, သင်ကမကောင်းတဲ့ခံစားချက်အတွက်ဘာတွေလဲ? သငျသညျ (ကြောက်) စိတ်ဓာတ်, ဒါမှမဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်နေကြသည်, သို့မဟုတ်သင်ပျော်ရွှင်ရှိပါသလဲ သင့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုအနုတ်လက္ခဏာမှန်လျှင်, အဘယ်ကြောင့်ထွက်ရှာပါ။
သင်၏အတွေးဖြစ်စဉ်များ (သို့) စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအခြေအနေတစ်ခုခုကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောမထားပါနှင့်။ ဤအရာသည်သင့်အားအလွန်အမင်းအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်သည့်နေရာတစ်ခုသို့ရောက်သွားစေနိုင်သည်။ သင်သည်ဤအပျက်သဘောအတွေးများ / ခံစားချက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အကြောင်းရင်းကိုသိရှိပြီးအမြန်ဆုံးပျော်ရွှင်မှုနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းအခြေအနေသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏ပြသနာများကိုသတင်းများ၊ အတွေးများနှင့်အတွေးများကိုကြည့်ပါ။ ဤရွေ့ကားငါတို့ကိုလည်းအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များသို့ ဦး တည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ် (စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်) သည်စိတ်ဆန္ဒ (အလိုတော်)၊ ဥာဏ် (အတွေးများ) နှင့်ပညာရှိ (စိတ်ခံစားမှု) များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလိုတော်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးများကိုတိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ခံစားမှုအခြေအနေများကိုသွယ်ဝိုက်။ သာထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ဆိုးနေလျှင်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ဝမ်းနည်းနေပါကကျွန်ုပ်တို့၏လက်ချောင်းများကိုဖမ်းယူရုံသက်သက်သာမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန္ဒများ (ပိုမိုကောင်းမွန်သော၊ မျှော်လင့်ချက်နှင့်ရွှင်လန်းဖွယ်ရာများသို့) ပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးများကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုများသည်နောက်ဆုံးတွင်ဖြစ်လာလိမ့်မည်။
LINK - Recovery ကိုဆယ်အခြေခံမူ
BY - လီယွန် (sola gratia)